(ENG) Ilaalinta Xogta & Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - Wevino.store
(ENG) Ilaalinta Xogta & Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah
Wevino.store raadin doonaa ilaalinta macluumaadkaaga gaarka ah. Fadlan hoos ka eeg burburka sida aan u ururinno & u isticmaalno xogta oo ay weheliso hagitaan ku saabsan sida loo sameeyo codsi ah in la tirtiro diiwaankayaga.
1. Adeegsiga macluumaadka shaqsiyeed
Wevino.store ururiyaa & isticmaashaa macluumaadka shakhsiga ah si ay u maamusho, u taageerto, gacan uga geysato dib-u-eegista iyo helitaanka jawaab-celinta adeegyada aan bixinno. Waxaan sidoo kale u isticmaalnaa xogta si aan u hubino in sharciyo ama heshiisyadayada qandaraaska aan jabin.
Haddii aad doorbideyso inaanan kugula soo xiriirin habka suuq-geynta tooska ah (tusaale ahaan joornaalka emaylka), fadlan la xiriir info@wevino.store & waxaan hubin doonnaa in faahfaahinta khuseysa laga saaro nidaamkayaga oo aan lagaala soo xiriiri doonin ilaa aad adigu codsato shaqsi ahaan ahaansho.
3. Ururinta macluumaadka shaqsiyeed
Macluumaadka shaqsiyeed waxaa aruuriya Wevino.store toos uga socota macaamiisha. Macaamiisha codsata faahfaahintooda waxay si ammaan ah ugu keydsan yihiin nidaamkayaga ama macaamiisha amarrada ku bixiya websaydhka waxaa loo hayn doonaa faahfaahintooda muddo macquul ah si loo fududeeyo, loo maamulo loona taageero adeegyada aan bixino.
4. Macluumaadka shaqsiyadeed ee aan ururinno
Oo ay la socoto xogta si toos ah loo siiyay Wevino.store macaamiisha shaqsi ahaan, taleefan ahaan ama emayl ahaan, waxaan sidoo kale ka soo ururin doonnaa xogta dadka isticmaala amarada ku soo rogaya websaydhka ama ka baaraya barta internetka. Xogtaan waxaa ka mid noqon kara diiwaanada, faahfaahinta shabakadaha, xogta & nidaamyada la helay, faahfaahinta soo diraha & qaatayaasha fariimaha lagu diro adeegyadeena, waqtiyada & goobta lagu soo galo ama la galo, muddada kalfadhiyada, riixista xogta & isticmaalka la midka ah ama xogta nidaamka. Xogtan mararka qaar waxaa laga yaabaa in lagu raad raaco / la xiriiro shirkadaha oo kaliya laakiin sidoo kale shaqsiyaadka la magacaabay. Fadlan xor u noqo daalacashada Wevino.store Websaydh si qarsoodi ah haddii aad walwal ka qabtid haynta xogta.
Markii la codsado waxaan siineynaa booqdayaasha goobta inay helaan dhammaan macluumaadka ay kujiraan macluumaadka mulkiilaha ee aan ilaalino iyaga (laakiin ma ahan kuwa kale oo aan ka ahayn haddii aan sharciga looga baahanayn) oo ay ku jiraan macluumaadka xiriirka (sida magaca, cinwaanka gudbinta, lambarka taleefanka, cinwaanka emaylka). Isticmaalayaashu waxay ka heli karaan macluumaadkan iyagoo emayl ama qoraal noo soo qoraya, fadlan dhibic 10 cinwaankeena boostada.
Waxaan sidoo kale ku soo aruurineynaa cinwaannada e-maylka kuwa nala soo xiriira adoo adeegsanaya emayl & macluumaad guud oo ku saabsan waxa bogagga isticmaalayaashu galaan ama booqdaan. Macluumaadka uu ku tabaruce adeegsadaha sida macluumaadka sahanka & / ama diiwaangelinta goobta ayaa sidoo kale la ururiyaa. Macluumaadka aan ururinno waxaa loo adeegsadaa ugu horreyn dib-u-eegista gudaha & hagaajinta waxyaabaha ku jira Wevino.store & adeegyada. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu ogeysiiyo adeegsadayaasha cusboonaysiinta adeegyadayada. Macluumaadkan lama wadaagayo cid saddexaad oo dano ganacsi leh & haddii aad doorbideysid inaadan ka helin waraaqaha emailka Wevino.store, fadlan emayl u soo dir info@wevino.store.
Haddii aad naga hesho emayl aan loo baahnayn oo dhan warqadahayagu waxay ku siinayaan tilmaamo cad oo ku saabsan sida looga baxo, laakiin fadlan emayl u soo dir info@wevino.store haddii aad ku dhibtoonayso inaad ka baxdo.
5. Hababka keydinta & muddada keydinta
Wevino.store waxay ku kaydin kartaa macluumaadkaaga keydkeeda, sida keydkeeda macaamiisha ama keydka alaab-qeybiyaha, tixraac ahaan. Macluumaadka waxaa hayn kara oo adeegsan kara Wevino.store mudo macquul ah, oo ka tarjumeysa baahida aan u qabno ka jawaabida su'aalaha ama xallinta dhibaatooyinka, bixinno adeegyo horumarsan & cusub & wixii shuruudo ah ee ku saabsan xog haynta sharciga. Tan macnaheedu waa inaan hayn karno macluumaadka ka dib markuu qofku joojiyo isticmaalka adeegyada Wevino.store ama ka dib markuu shaqsigu joojiyo la macaamilkiisa Wevino.store. Marka laga reebo halka sharciga, mas'uuliyiinta ama hay'adaha xakamaynta ay nooga baahan yihiin inaan sii haysanno muddo dheer, waxaan haysannaa xogta ay soo saareen isticmaaleyaasha booqanaya websaydhka muddo macquul ah ka dib markii la soo saaray.
Wevino.store kaliya waxay la wadaagi doontaa xogta dhinacyada saddexaad halkaasoo aad si gaar ah ugu raacsan tahay. Xogta looga baahan yahay fulinta adeegyada sida keenista (magaca wakiilka, cinwaanka gudbinta, taleefanka iwm) ayaa si aamin ah loogu wareejin doonaa qeybta saddexaad ee ay quseyso halka loo baahdo. Waxaan kaliya siin doonaa macluumaadkaaga shirkadaha ka shaqeeya si waafaqsan shuruudaha sharciga ee ku saabsan maaraynta xogta, ilaalinta & keydinta. Faahfaahinta cidda xogtaada loo gudbiyay & ujeedka laga leeyahay marka la codsado.
Wevino.store Liiska macaamiisha lama wadaago dhinac saddexaad.
7. Digniinta emaylka, waraaqaha & joornaalada
Wevino.store waxay marmarka qaarkood u soo diri doontaa digniino emayl & waraaqo isweydaarsi ah macaamiisha amarrada dul dhigay dukaanka, taleefanka, emaylka ama websaydhka. E-mayllada ayaa loo diri doonaa cinwaanada si toos ah loogu soo diro Wevino.store macaamiisha. Waxaan sidoo kale si dhif ah ugu diri karnaa joornaalada xayeysiinta dhadhanka dukaanka, alaabada cusub iwm. Waqti kasta waxaad dooran kartaa inaad joojiso helitaanka digniinta emaylka ama joornaalada adoo raacaya tilmaamaha digniinta, ogeysiinta ama joornaalka ama cinwaanka e-maylka @ wevino.store
8. Korjoogteynta wicitaanka e-maylka
Waxaan dhexgalin karnaa e-mayl loo diro shaqsiyaadka kujira gudaha Wevino.store. Tani waxay noqon kartaa sababo nabadgelyo awgood, ogaanshaha fal dambiyeed ama in la hubiyo in adeeg degdeg ah la bixiyo inta uu shaqaaluhu maqnaado. Waa laga yaabaa inaan diidno, dib u dhigno ama ka saarno waxyaabaha emayllada leh dabeecad, nuxur ama lifaaqyo carqaladeyn kara Wevino.store' Nidaamyada amaba maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inay keenaan arrimo amni sida fayras
Sida caadada u ah dhamaan shabakadaha xirfadleyda ah boggan ayaa adeegsada cookies, oo ah faylal yaryar oo loo soo dejiyo kombuyuutarkaaga, si loo wanaajiyo khibradaada. Boggan wuxuu sharaxayaa macluumaadka ay aruurinayaan, sida aan u istcimaalo iyo sababta aan mararka qaar ugu baahanahay inaanu kaydin karno cookies. Waxaan sidoo kale wadaagi doonnaa sida aad uga hortegi karto cookies-kaan in la keydiyo hase yeeshee tani waxay hoos u dhigeysaa ama 'u jebin kartaa' qodobbada qaar ee howlaha bogagga.
Macluumaad guud oo dheeraad ah oo ku saabsan dukumiinti eeg maqaalada Wikipedia ee ku qoran Kukiyada HTTP.
Sida aan u isticmaalno Kukiyada
Waxaan u isticmaali karnaa cookies sababo kala duwan oo faahfaahsan hoosta. Nasiib daro kiisaska intooda badan ma jiraan doorashooyin heerarka warshadaha ah ee lagu joojiyo koobiyooyinka iyadoo aan si buuxda u jajabin shaqeynta iyo sifooyinka ay ku daraan boggan. Waxaa lagu talinayaa in aad ka tagto dhammaan cookies haddii aadan hubin haddii aad u baahan tahay ama haddii aysan jirin sabab loo adeegsado bixinta adeeg aad isticmaasho.
Waxaad ka hortagi kartaa goobaha cookies adigoo la qabsanaya goobaha shabakadaada (eeg boggaaga bogga ah ee ku saabsan sida loo sameeyo tan). La soco in cookie-yada naafada ah ay saamayn ku yeelan doonto shaqeynta boggan iyo kuwo kale oo badan oo aad booqanayso. Kajinta badinta cookies waxay badanaa keentaa in ay sidoo kale joojiso shaqeynta iyo muuqaalada qaar ka mid ah boggan. Sidaa awgeed waxaa lagula talinayaa in aadan ka joojin karin cookies.
Kukiyada Waan Qaadaynaa
Waraaqaha iimaylka ee ku saabsan emaylka
Boggan ayaa bixiya wargeys ama adeegyo rukhsad e-mayl iyo cookies waxaa loo isticmaali karaa in lagu xasuusto haddii aad mar horeba iska diiwaangashan tahay iyo haddii aad muujiso ogeysiisyo qaarkood oo laga yaabo inay ansax u noqon karaan isticmaaleyaasha aan diiwaangashan / aan weli la qorin.
Wuxuu amrayaa ka baaraandegista cookies-ka la xiriira
Boggan ayaa bixiya adeegyo elektaroonig ah ama tas-hiilaad bixin iyo qaar ka mid ah cookies-yada ayaa lagama maarmaan ah si loo hubiyo in amarkaaga lagu xasuusto inta u dhexeysa bogagga si aan si habboon uga shaqeyn karno.
Noocyada la xiriira cookie-yada
Markaad gudbiso macluumaadka foomka sida kuwa laga helo bogagga xiriirinta ama foomamka faallooyinka ah ee cookies waxaa laga yaabaa in la dejiyo si loo xasuusto faahfaahintaada isticmaalahaaga ee waraaqaha mustaqbalka.
Xaaladaha qaarkood gaar ahaan waxaan sidoo kale isticmaalnaa cookies ay bixiyaan dhinac saddexaad oo la isku halleyn karo. Faahfaahinta qaybta soo socota ee ku jirta cookies-ka qaybta saddexaad ee aad la kulmi karto goobtan.
Boggani wuxuu isticmaalaa Google Analytics kaas oo ka mid ah xalka ugu faqiirsan ee lagu kalsoon yahay ee webka ku jira si uu nooga caawiyo inaan fahamno sida aad u isticmaasho goobta iyo siyaabaha aan u hagaajin karno khibradaada. Kukiyadaas waxaa laga yaabaa inay la socdaan waxyaabaha sida mudada aad ku qaadato bogga iyo bogagga aad booqatid si aan u sii wadi karno soo saarida mawduucyo xiiso leh.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan kukiyada Google Analytics, fiiri bogga Google Analytics ee rasmiga ah.
Waxaan rajeyneynaa in ay caddaynayso waxyaabo adiga ah oo hore loo soo sheegey haddii ay jirto wax aadan hubin haddii aad u baahan tahay ama aysan ahayn badiyaa amniga inaad ka baxdo kobcinta karti leh haddii ay wax ka qabato mid ka mid ah sifooyinka aad isticmaasho boggayaga.
Amniga la xiriira dhiibida & keydinta diiwaanka elektarooniga ah & muuqaalka jirka ayaa si dhab ah loogu qaadaa Wevio.store & waxaan qaadeynaa talaabooyin macquul ah (oo ay kujiraan xakamaynta marin u helida, ilaalinta erayga sirta ah, sirta, digniinta, dib u soo celinta, jawiga deegaanka & gudbinta / heerka isgaarsiinta) si looga ilaaliyo lumitaanka, wax ka bedelka ama ku takrifalka macluumaadka shaqsiyadeed ee wevino.store.
Ma keydin doonno kaarka deynta macmiilka ama faahfaahinta kaarka deynta waqti kasta oo waqti ah. Faahfaahinta kaadhka bixinta ayaa lagu qoray Wevino.store degelku waa mid sir ah markasta & lama keydin.
10. Su'aalaha & weydiimaha
Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid Wevino.store asturnaanta / nidaamka ilaalinta xogta ama adeegsiga xogta adeeg gaar ah, waa inaad warqad u qortaa
Lambarka caddaynta: IT00TSV00041K